Lehilahy sy fitsangatsanganana an-tsambo: 10 zavatra tian'ny lehilahy amin'ny fandehanana an-dranomasina |
Location: Home » fandefasana » Vaovao » Lehilahy sy fitsangantsanganana an-tsambo: Zavatra 10 ambony izay tian'ny lehilahy ho any an-dranomasina
Lehilahy sy fitsangantsanganana an-tsambo: Zavatra 10 ambony izay tian'ny lehilahy ho any an-dranomasina
Jolay 29, 2016
DETROIT, MI – Indray andro, ny fitsangantsanganana dia tian'ny vehivavy fialan-tsasatra kokoa noho ny an'ny lehilahy, miaraka amin'ny hetsika izay manintona kokoa ny lahy sy ny vavy.
Mandroso haingana amin'ny sambo ankehitriny, hoy i CruiseCompete, ary hita izao fa ny lehilahy sy ny fitsangatsanganana dia afaka - ary manao - miaraka.
Fanatanjahan-tena, adrenalinina ary fitsangatsanganana dia be dia be, izay mahatonga ny fialan-tsasatra ho an'ny mpivady tonga lafatra na ny fialan-tsasatry ny fianakaviana - ary mihamaro ny vondron'ny lehilahy no mamandrika sambo ho toy ny "dia ho an'ny lehilahy".
Ireto ny zavatra tena tian'ny lehilahy any an-dranomasina:
1.) Sakafo mahafinaritra "24/7" - Ny buffet mahazatra sy ny trano fisotroana kafe bistro dia manolotra sakafo maivana. Misy sambo kafe misy mofomamy, ary toeram-pisakafoanana hamburger koa! Saika amin'ny sambo rehetra dia azonao atao ny manafatra pizza na serivisy amin'ny efitrano 24. Ny trano fisakafoanana manokana dia manolotra ny famandrihana - traikefa fisakafoanana ihany, fa ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana dia tonga sy mandeha, ary ny akanjo mahazatra dia raisina.
2.) Hit the Gym - Te hanohy an'io asa io any an-dranomasina? Ny sambo ankehitriny dia manana lalamby mihazakazaka sy toeram-panatanjahantena sy fitaovana manara-penitra. Azonao atao ny miasa amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny fomba tsara indrindra hanaovana an'io sakafo io - mandeha tongotra vitsivitsy manodidina ny lalamby eny an-tampon'ny sambo, mifoka rivotra madio.
3.) Tee It Up - Mbola afaka mankafy ny lalao eny an-dranomasina ny mpilalao golf mazoto. Ho fanampin'ireo simulators golf amin'ny ordinatera amin'ny ordinatera, dia nanitatra ny fijanonany any amin'ny sasany amin'ireo lalao golf malaza sy sarotra indrindra eran'izao tontolo izao ny zotra fitsangatsanganana.
4.) Fanatanjahantena Fialam-boly - Nivadika ho toeram-pialam-boly mitsingevana ny zotra fitsangatsanganana ary ahitana fanavaozana toy ny lalantsara bowling, dobo filomanosana Flowrider, dobo filomanosana mihodinkodina ary rindrina fihanihana vatolampy sarotra. Ary tsy mijanona eo ny fanavaozana. Tamin'ny taona 2015, ny Royal Caribbean dia nampiditra ny simulator antsitrika an-danitra voalohany tamin'ny sambony, Quantum of the Seas.
5.) Mandany ny andro amin'ny nosy tsy miankina - Ny nosy tsy miankina amin'ny zotra an-tsambo dia misy fitaovana toy ny fanatanjahan-tena amoron-dranomasina sy rano, snorkeling, fanofana sambo sy kayak, ary fahafahana manao fitsangatsanganana sy fitsangantsanganana.
6.) Adventures tsy manam-paharoa - Ny dia an-tsambo dia manome fahafahana tsy tambo isaina ho an'ny lehilahy mitady fitsangatsanganana sy fisondrotana amin'ny haavon'ny adrenalinina. Ny Carnival Cruises dia mitondra mpandeha mankany Belize amin'ny fitsangatsanganana lava-bato tsy hay hadinoina sy fitsidihan'ny ala tropikaly, ary ny Crystal Cruises dia mametraka ireo mpandeha izay mankafy haingana ao ambadiky ny kodiaran'ny Ferrari, Lamborghini na Maserati ho an'ny fikarohana mahaleo tena an'i Monaco.
7.) Bara labiera, divay ary sigara - Ho an'ireo 21 taona mahery, ireo mpanao labiera iraisam-pirenena dia mampiseho labiera marika sy manokana ary manohana fety manokana manandrana labiera. Ho an'ny lanilany be pitsiny kokoa, ny tsipika dia manolotra fahafahana hanandrana divay sy trano fisotroana sigara.
8.) Apetraho ny Bet- Ho an'ny "lehilahy filokana", saika ny sambo fitsangatsanganana an-dranomasina rehetra dia manana casinos mitsingevana izay miasa rehefa eny an-dranomasina ny sambo, na rehefa mamela ny lalao amin'ny seranana ny lalàna eo an-toerana. Malaza ny Blackjack, roulette, poker, craps ary milina slot; Ireo mpitaingin-tsoavaly veterana dia mitatitra fa ny sambo vaovao indrindra ao amin'ny Royal Caribbean dia ahitana ny faritra filokana lehibe indrindra. Ary maro ny zotra misy seranan-tsambo izay manolotra casinos an-tanety.
9.) Spa Indulgence- Ny tatitry ny indostria dia milaza fa saika ny ampahatelon'ny mpitsidika spa dia lehilahy, ary tsy mahazatra ny mahita azy ireo mankafy fanorana, facial ary pedicure. Ny serivisy malaza hafa dia ahitana aromatherapy, hydrotherapy ary thalassotherapy (fitsaboana mifototra amin'ny rano).
10.) Fialam-boly tsy an-kiato – Tsy karaoke cheesy ny seho an-tsambo – mamokatra fialam-boly mitentina an-tapitrisa maro ny andalana. Ny Blue Man Group, mozika mivantana ahitana vondrona mozika ankehitriny sy malaza (KISS dia ho lohatenin'ny NCL's Norveziana Pearl amin'ny Novambra 2016, ary ny hetsika hatsikana mitsangana (manasongadina ireo mpanao hatsikana malaza) dia anisan'ny malaza indrindra, fa ny andalana dia manolotra fialamboly ho an'ny tsiro rehetra. .
Ny marika Hyatt Regency dia miverina any Xi'an any avaratr'i Sina
Ny Arik Air dia manohana ny mari-pahaizana One Africa Music Fest any New York
Amidy! Twitter dia manaiky tolotra 44 lavitrisa dolara avy amin'i Elon Musk
Mpahatra mihoatra ny 100 no nekena ho amin'ny fitsangatsanganana azo antoka any Guam...
Ny Fitsarana ao amin'ny Vondrona Eoropeana dia mandidy ny fanofa trano fohy tsy maintsy mamatsy...
Ny fanirian'ny britanika hifindra monina dia miakatra noho ny fiakaran'ny hetra sy ny...
Hitan'ny FAA fa tsy azo antoka ny Hawaii Airlines
WestJet dia miantso ny filoha lefitra mpanatanteraka vaovao, Cargo
Ny Blossom Hotel Houston dia manolotra ny fonosan'ny Fetin'ny Reny
Ny Sandals Foundation dia mitahiry ny asa tanana Karaiba, Kolontsaina...
Naverina tamin'ny laoniny ny mandat saron-tava tany Kenya tao anatin'ny COVID-19 vaovao…
Yukon Joins UNWTO Tambajotran'ny fizahantany maharitra...